Fitohizan'ny hafatra : Re : Baiboly tsy Atra, ary tsy mahalaza ny momba an'Atra rehetra
Pejy: Voalohany < 3 4 5 6 7 >
Fody - 22/04/2008 14:47
Cutie : Ohatra: ny filazana fa Jesoa dia manana nature roa: sady Andriamanitra no olombelona.
Ny filazana fa: Ny Fanahy Masina koa dia Andriamanitra ary Olona (Persone) fahatelo ao amin'ny Trinite Masina.
cutie - 22/04/2008 14:50
ka efa we taiza no nahalalanareo an'zany
ikaretsaka - 22/04/2008 15:00
tsary voatery ho tao anaty Baiboly no nahalalana izany fa koa t@ ireo Lovan-tsofina t@ apostoly,izay nahita mivantana an'i Jesoa sy ny fanahy Masina tao aminy, betsaka ny boky maro nosoratan'ireo apostoly ireo izay tsy voaraikitra ao anaty baiboly, ary t@ fanahy masina koa dia nanazava indrindra indrindra. ary ny fandinihina ny asan'Atra (sy ireo personnes 3 ireo) eo @ fiainana andavanandro mandrak'androany.
Scriptures and Traditions
Citation tadidio fa tsy nijanonana teo amin'ny SORATRA, na izay voasoratra, fa nampifandraisina tamin'ny fomba fisehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona, izay tsy hary voasoratra daholo.
Mandefitra - 22/04/2008 15:04
Raha resaka doctrine ny tian'i Fody hahatongavana dia tsotra :
L'Ecriture Saint est la source et la norme de la doctrine chretienne.
Notovozina tao @ Baiboly io Trinite io, fa raha tsia, dia valio hoe taiza no nakanareo azy? Ary inona no entina hanamarinana azy?
- Ny fanaovana Batisa @ anaran'ny Ray sy Zanaka sy Fanahy Masina araky ny baiko nomen'i Jesosy
Lioka 1 : 35 Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe: Ny Fanahy Masina ho tonga ao aminao, ary hisy herin'ny Avo indrindra hanaloka anao; koa ny Masina Izay hateraka dia hatao hoe Zanak'Andriamanitra
Jaona 15 : 26 Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin'ny Ray, dia ny Fanahin'ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin'ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy.
IKor 12: 4 Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany.
Raha ireo fotsiny aza de ampy hampiharihary ny atao hoe Trinite.
cutie - 22/04/2008 15:07
Citation betsaka ny boky maro nosoratan'ireo apostoly ireo izay tsy voaraikitra ao anaty baiboly, ary t@ fanahy masina koa dia nanazava indrindra indrindra. ary ny fandinihina ny asan'Atra (sy ireo personnes 3 ireo) eo @ fiainana andavanandro mandrak'androany.
de aiza zany boky zany koa?
ikaretsaka - 22/04/2008 15:25
any @ biblioteques... feno @ net... jereo ny tantaran'olomasina..
midira na mianara bebe kokoa momban'ny katolika
cutie - 22/04/2008 15:51
Citation midira na mianara bebe kokoa momban'ny katolika
mba asio santionany e
ikaretsaka - 22/04/2008 16:08
mianara aloha katesizy sns aloha no solution tsotra indrindra... miainga aminao sy A/tra io
efa mandeha eto ihany manko ny famaliana ireo fanontaniana bedebe mikasika an'io eto.. efa misy website manampy bebe kokoa.. sns..
miainga avy aminao io e
cutie - 22/04/2008 16:19
Citation Mpandefa : ikaretsaka [ Valio ] 22-04-2008 16:08:15
Lohateny : Re : Baiboly tsy Atra, ary tsy mahalaza ny momba an'Atra reh
za ve de hianatra rery eo fa zany no ilaina ny forum :-D
ikaretsaka - 22/04/2008 16:34
na ny fahavononanao no mikaonty raha ianao no resaka fa tsy ny fahavononam-porum ...aiza ary ny lojikan'i cutie izany...
mandefitra: tsy ny baiboly IHANY no nanovozana io fa karazan'ny source nanaovana compilation fotsiny izy ... piece 1 an'ny lego!
cutie - 22/04/2008 16:47
Citation 89. Mpandefa : ikaretsaka [ Valio ] 22-04-2008 16:34:09
resadresaka eto ihany no tiako fa za tsy te hiditra lalina :-D
ikaretsaka - 22/04/2008 16:50
dia aza mitsapa ny halalin'ny rano aza sao tonga dia difotra..
cutie - 22/04/2008 17:54
Fody - 22/04/2008 18:44
Citation - Ny fanaovana Batisa @ anaran'ny Ray sy Zanaka sy Fanahy Masina araky ny baiko nomen'i Jesosy
Io va dia milaza fa Andriamanitra aby na ny Ray na ny Zanaka na ny Fanahy Masina ?
Citation Lioka 1 : 35 Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe: Ny Fanahy Masina ho tonga ao aminao, ary hisy herin'ny Avo indrindra hanaloka anao; koa ny Masina Izay hateraka dia hatao hoe Zanak'Andriamanitra
Dia aiza amin'io no milaza fa Andriamanitra ny Fanahy Masina, ary aiza koa no miteny fa i Jesoa dia tena Andriamanitra no sady tena olombelona ?
Citation Jaona 15 : 26 Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin'ny Ray, dia ny Fanahin'ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin'ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy.
Dia aiza no milaza eto koa fa Andriamanitra ny Fanahy Masina ?
Citation IKor 12: 4 Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany.
Dia inona no ifandraisan'izany amin'ny resaka Trinite Masina ?
Citation 5 Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihany.
Ilazana fa tsy misy Andriamani-kafa io, fa tsy misy ifandraisany amin'ny resaka Trinite Masina mihitsy.
Citation 6 Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, Izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra.
Ity kosa dia ilazana fa omniprésent Andriamanitra fa tsy misy idiran'ny hoe: Trinite Masina na kely aza.
Citation Raha ireo fotsiny aza de ampy hampiharihary ny atao hoe Trinite.
Valio ireo fanamarihana miendrika fanontaniana ireo.
fijo - 22/04/2008 23:21
mandefitra,ny mpino protestanta dia mampiasa ary mino ny hoe "telo izay iray",fa ny tiako hoay dia hoe voasoratra ve io teny io ao sa tsia.
raha tsy ao mantsy io,dia marina ny an'i fody.fa raha ita ao anaty baiboly mazava kosa io,dia mila miverina mijery ny soratra i fody.
ikaretsaka - 23/04/2008 00:00
fijo, mandefitra> ny teny hoe "trinity" dia tsy misy ao anaty baiboly na 1 aza...
ny hoe "telo izay iray" dia tsy misy koa na hoe "Andriamanitra dia tokana fa olona telo"
fany voalaza ao de entite 3 mazava tsara ny fisehony sy ny asany araka io nolazain'i fody io: tsy misy miteny hoe Andriamanitra zanaka ihany ny Atra Fanahy masina na andriamanitra Ray Ihany ny Andriamanitra Fanahy masina na Andriamanitra Fanahy Masina ihany i Andriamanhitra Ray!
Mandefitra - 23/04/2008 06:42
Mitohy ihany ny fandraisana ny Soratra Masina hanazavana fa Andriamanitra ny Fanahy Masina :
IKor 3: 16 Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra hianareo, ary ny Fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo?
IKor 6: 19 Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Ka tsy tompon'ny tenanareo hianareo.
Diniho kely ireo : Tempolin'Andriamanitra ianareo : ny tenanareo Tempolin'ny Fanahy Masina
2/ Mark 3: 29 fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hohelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy; izany no nolazainy
Maninona moa io no tsy asianao commentaire? Tsy ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina ve no tsy hahazoana famelankeloka raha itenenana ratsy?
=>Ny Apostoly Paoly sy Petera eto dia mampiharihary ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina
Omena anao ny fitenenana Mr Fody sy Karetsaka
ikaretsaka - 23/04/2008 16:26
Ka aiza ny misy resaka trinite @ ireo?
aiza no misy ilay "telo nefa iray" amin'ireo? aiza ny fanazavana izay ry mandefitra??
avoahay raha misy
lizabeth - 23/04/2008 18:00
Citation Ny trinite dia milaza ny famonjen’Atra am alalan’i JK.
Eto aloha dia efa tsy ekeko. Satria ny Trinite Masina dia tsy milaza "action" fa "relation".
Citation Raha azoko tsara dia aminao ny Baiboly tsy milaza io satria tsy misy teny milaza hoe trinité = Atra+Jesoa+Fanahy Masina.
Ny filazanao koa hoe: "Trinité = Atra + Jesoa + Fanahy Masina" dia midika avy hatrany fa Jesoa sy ny Fanahy Masina dia tsy Andriamanitra. Donc mbola laviko koa izany, satria Ny Ray, Ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina dia samy Andriamanitra avokoa.
=>Ny tiako ambara dia hoe satria ianao tsy mahita karazana "formule" anaty baiboly manome ilay trinité fa tsy dia misy dikany loatra ny = sy ny + eto !
Citation « …Zanany, Izay nateraka avy tamin’ny taranak’i Davida araka ny nofo, ary naseho tamin-kery ho Zanak’Atra araka ny fanahin’ny fahamasinana tamin’ny fitsanganana tamin’ny maty, dia Jesosy Kristy Tompontsika ».
Dia aiza amin'io no milaza fa i Jesoa dia sady Andriamanitra no Olombelona.
Isika olombelona koa anie azo atao hoe: zanak'Andriamanitra rehefa mandray ny Fanahy Fanamasinana e! Fa moa ve isika Andriamanitra?
=> ny fanontanianao hoe Jesoa sady Atra no Olombelona no valiako eo
Zanak'Atra isika par adoption isika, Jesosy tsy adopté !
Citation Nandritra ny fiainany dia hita foana ny maha olombelona sy Atra an’i Jesosy. Vizana sy natory ohatran’ny olona rehetra Izy ohatra tamin’ny niantsambo niaraka tamin’ny mpianany. Nefa, contrairement tamin’ireo mpianatra, nahavita nampitsahatra ny rivotra Izy.
Citation Momba ny Fanahy Masina dia manana ny maha Izy azy koa any amin’ny TT fa ao amin’ny TV dia fahatelo amin’ny trinité dia voalaza ao amin’ny Rom 8.11 : « ary raha ny Fanahin’Izay nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia Izay nanangana an’i Kristy Jesosy tamin’ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin’ny Fanahiny, Izay mitoetra ao anatinareo ». Tsy mahalaza ny fifamatoran’Atra sy Jesosy sy ny FM eo amin’ny fianan’ny zanak’olombelona ve izany ?
Vakio tsara ny voasoratra eto fa hoe: "raha ny fanahin'izay nanangana..." Tsy misy milaza hoe: Raha ny Fanahy Masina.
Ary dia mbola hamafisiny indray moa hoe: "Izay nanangana an'i Kristy Jesoa tamin'ny maty..." Iza no nanangana azy tamin'ny Maty ?
=> ankamantatra !
Citation Tsy hilaza akory aza aho hoe ampy ny baiboly fa « riche » ny baiboly raha hilaza momba an’Atra.
raha ity hevitra lazainao ity dia tena manaiky aho. Ary mahatsapa an'izany koa.
Citation Ny TT dia milaza ny momba an’Atra : mpamorona, fahendrena, voninahitra…izay tsy ho voatanisa ka eo indrindra no tiako lazaina hoe efa hitanao daholo ve ireo toetran’Atra voalaza ao ka ilazanao amin’ny fomba miezinezina fa tsy ampy ny baiboly, tsy mahalaza ny momba an’Atra rehetra ?
Tsy mila mamantatra an'ireo rehetra voalaza ao amin'ny Baiboly dia efa afaka milaza fa tsy mahalaza ny momba an'Andriamanitra rehetra izy.
=> raha ny bon sens aloha, fa tsy asiana resaka baiboly na tsy baiboly, dia tsy tokony afaka miteny hoe "tsy ampy" raha tsy efa nahita ny rehetra nefa tsy afa-po
1 - Raha voafaritra sy voalaza daholo ny momba an'Andriamanitra dia midika fa diso ny filazana fa tsy manam-pahataperana izy, tsy taka-pesipesena, sns...
=> ka eo indrindra isika mantsy : amiko na ny kristiana farak'izay antampom-pahendrena sy fahamasinana aza tsy ahafantatra ny momba an'Atra rehetra ka tsy afaka hiteny mihitsy hoe tsy voalaza ao amin'ny baiboly DAHOLO ny momba an'Atra
3 - Raha voalazanao ny momba an'Andriamanitra rehetra dia midika fa "kely" noho ianao izy izany, satria fantatrao ny aminy rehetra. Dia vakio ny ao amin'ny Salamo izay milaza fa Andriamanitra no mahalala ny momba antsika rehetra satria kely sy bitika isika eo anatrehany.
=> tsy izaho mihitsy no milaza mahalala ny momba an'Atra rehetra fa ianao na ny hevitrao !
4 - Raha fantatrao ny momba an'Andriamanitra rehetra dia midika koa fa azonao fehezina izy izany. Izay anefa ve no izy ? sns....
Citation ankoatran’ny Baiboly dia ny olombelona sy ny zavaboahary amiko no manampy « mitory » an’Atra fa tsy boky hafa, milaza zavatra HAFA noho ny baiboly momba an’Atra. Tsy satria tsy mahazo révélation ao am Baiboly ianao dia hoe tsy ampy ny baiboly !
Ianao ihany dia efa manohitra ny zavatra lazainao eto. Raha ampy mantsy tsy tokony hampiana intsony.
=> ny olombelona sy ny zavaboahary en tant que asan'Atra no resahiko. Ohatra ny fiforonan'ny taolan'ny olombelona : mitory ny fahaizan''Atra izany fa voalaza anaty baiboly ihany koa ! tsy misy fifanoherana izany !
Ary izaho raha milaza fa tsy ampy ny Baiboly dia tsy milaza fa tsy mamaky Baiboly aho izay, na mandà izay voalaza ao. Na mitady boky hafa manohitra ny Baiboly. Aminareo mantsy rehefa milaza hevitra iray izay tsy hitanareo izay hanoherana azy, nefa marina dia lazaina fa tsy manana an'i Jesosy na manana Andriamanitra hafa.
=> tsy niteny an'izany aho fa ni suppose aza fa efa voavakinao daholo ny baiboly manontolo
Citation Fa hoy ianao hoe tsy voalazan’ny baiboly ireo : dia taiza aza no nahitanao fa Atra dia Trinite Masina, Ny FM dia Olona fahatelo, Jesoa dia sady Atra no Olombelona (izay ekenao)
Ny Boky milaza momba an'Andriamanitra betsaka, araka izay nolazainao dia ny Baiboly.
Io no niaingan'ny fandinihana. Fa tsy nijanonana teo amin'ny SORATRA, na izay voasoratra, fa nampifandraisina tamin'ny fomba fisehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona, izay tsy hary voasoratra daholo.
=> misaotra fa izay no tiako ahatongavanao : rehefa ny baiboly no iangana dia midika izany fa ampy ny baiboly, tsy vitan'ny ampy fa fototra
Fody - 23/04/2008 18:33
Citation IKor 3: 16 Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra hianareo, ary ny Fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo?
Ny filazana fa Tempolin'Andriamanitra ny tenantsika, sy ny hoe: tempolin'ny Fanahy Masina dia tsy midika avy hatrany fa Andriamanitra ny Fanahy Masina, satria azo lazaina tsara hoe: Tempolin'Andriamanitra sy ny Fanahy Masina ny tenantsika.
Citation 2/ Mark 3: 29 fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hohelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy; izany no nolazainy
Raha io no raisina ka ilazana fa Andriamanitra ny Fanahy Masina, dia mazava ho azy izany fa tsy Andriamanitra i Jesoa satria hoy ny ao amin'ny Matio:
" Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné; mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni en ce monde ni dans le monde à venir".(Matthew 12:32)
Ary ny olona niblasphème an'i Jesoa koa dia mbola voavela heloka. Eto anefa dia lazainao fa Andriamanitra ny Fanahy Masina noho izany tsy ho voavela heloka mihitsy izay miteny ratsy azy. Ka Andriamanitra ve izany Jesoa sa tsia satria mbola voavela heloka izay manohitra azy, izay miteny ratsy azy ?